Rize-Artvin Airport ichatanga riini basa? | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYTurkish Black Sea Coast08 ArtvinRize-Artvin Airport ichatanga riini basa?
Rize-Artvin Airport ichatanga riini basa?
07 / 01 / 2020 08 Artvin, 53 Rize, GENERAL, Airports, Turkish Black Sea Coast, HIGHWAY, musoro wenyaya, TURKEY
rize artvin airport yakapera
Bazi Transportation uye Infrastructure 766 hectares uye projected Nheyo zvakachengeterwa makore 2,5 apfuura, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Turkey kwakaita 2nd Airport Rize- akavaka pagungwa anozadza 52 muzana Artvin Airport apera.
Mukuvakwa kweRize-Artvin Airport, iyo yakagadzirirwa nebazi rezvekutakurwa nezvivakwa panzvimbo makumi matanhatu nemakumi matanhatu nenhatu emahara muYeşilköy, Rize's Pazar district uye yakaiswa neMutungamiriri Recep Tayyip Erdoğan musi waApril 766, 3, mamirioni 2017 emunda akavakirwa mahekita 266 epasi. dombo rinoshandiswa. Munzvimbo inotakurwa marori zana nemasikati masikati nousiku, kuzadza kwegungwa kunoenderera. Kunze kwemarori, ngarava mbiri dzekuchera dzino shandiswawo. Anenge zviuru zana nemakumi matani ezviuru zvezuva kuzadza mukuvakwa kwendege, runway kuzadza nzira kuri kuenderera. Canada
Matombo akazadzwa nemarori echikepe chekuchera anocherwa mugungwa pakadzika kwemamita makumi maviri nemasere. Iyo nzvimbo yemukati yemamol ichave inosvika mamirioni maviri emamirimita mativi uye ezviuru zvemamirioni mazana mana emamirimita emamirita ezere gungwa anozoitwa. 28 muzana yepurojekiti yacho yapera, kudzorera nekuzadza kugadzirwa muimhanyi, apron uye matareji ematangi muna Kurume 2 mune hwaro, chikamu chepasi uye kugadzirwa kwekubika chakarongwa kutanga. Inotarisirwa kushandiswa nevanhu mazana matatu emamiriyoni emadhiza pagore Rize-Artvin Airport zvigadzirwa zvinoshanda, ichaita bhiriyoni imwe 2 miriyoni mapaundi.
Rize uye Artvin Airport nhamba kushoma munyika, yendege Turkey kechipiri vazadze gungwa. Iyo ine yakazara kuzadza nzvimbo yemamirioni mazana maviri nemakumi matanhatu emamirita zviuru. 2 miriyoni mazana mashanu emazana mashanu ematani matani ekuzadza achaitwa panhandare. Kuita iri basa kutenderera nemachina mazana matatu ari kushanda maawa makumi maviri nemana.
Mupiro weRize-Artvin Airport kune kushanya uchave wakanakawo. Nenhandare yendege, Nzvimbo dzakakwirira dzeNyanza dzichawedzera kuve nyore. Trade, zvekufambisa, zvinhu, mudunhu rinozove nebasa rakawanda. Ovit Tunnel, iyo inofungidzirwa kuve yakabatanidzwa kune airport, yakapera. İyidere logistics port inotanga gore rino. Zvigadzirwa zveEast uye South East zvino zvasvika kune Logistics port uye airport ku İyidere mune pfupi pfupi nguva kupfuura kare. Kubva pano, kufambisa kwakanyanya kuwedzera, kushanya uye kutengesa kune nyika dzeCaucasan neAsia zvakarongwa.
Ndeapi Rize-Artvin Airport ichazaruka?
Nhanho inokosha ye Rize-Artvin Airport
Rize Artvin Airport ichava 3 mamita kusvika 45 mamita
Tender to Rize-Artvin Airport ichaitwa nhasi (Vhidhiyo)
Rize-Artvin Airport inotangwa muna April
Nheyo dzeRize-Artvin Airport dzakaiswa nemhemberero
Rize-Artvin Airport ichave yakagadzirira kutiza ku2020
Kuchengetedzwa Kwemhepo kubva Erdoğan kusvika kuRize-Artvin Airport Construction
Nhoroondo itsva paRize-Artvin Airport
Mutungamiri Arslan Akaongororwa muRize-Artvin Airport Construction
Pedyo ne40 yeRize Artvin Airport Project Yapera
Emulsion Asphalt Kugadzirwa, Surface Coating uye Kaplama
3. Bhiriji richauya rini kushanda rini?
Konya-Karaman-Mersin YHT rini ruchaiswa rini?
Halkalı-Sirkeci Commuter Train Kana uchifanira kushanda
89% yeVagari Vanoda Kutenga Dzimba Dzemukati